Abwaan Cabdulle Geedanaar oo lagu qasbay in markale lagu nikaaxiyo xaaskiisa (Maxaa dhacay?) * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Abwaan Cabdulle Geedanaar oo lagu qasbay in markale lagu nikaaxiyo xaaskiisa (Maxaa dhacay?)
By A warsame	 Last updated Nov 6, 2014
Maree.com: Abwaan Cabdulle Axmed Maxamuud (Geeda-naar) oo si weyn loogu yaqaano Shiribka, Guurowga iyo Gabayada, sanadihii lasoo dhaafana ku sugnaa Muqdisho ayaa isu dhiibay Alshabaab, wuxuuna ka hadlay wixii uu la kulmay markii uu tegay Tuulada Masaajid Cali Guduud oo ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Geed-naar ayaa markii uu u tegay Alshabaab, wuxuu la hadlay warbaahinta ururukaas, wuxuuna sheegay inuu isu dhiibay Alshabaab, kadib muddo 3 sano ah oo Muqdisho ku sugnaa, islamarkaana ka gabyayey munaasabahada ay qabato dowladda Soomaaliya.
Arrinta la yaabka leh ee Geeda-naar qabsatay ayaa aheyd in Alshabaab kadib markii ay iska cafiyeen ay usoo jeediyeen in xaaskiisa mar kale lagu nikaaxiyo, taasoo uu sheegay inuu aqbalay.
“Muddo 3 sano iyo bilo ah ayaan joogay Xamar, munaasabado ayaa kuwa gaalada ah iga waceen, xoogaana waan ka tirtiriyey, kadibna wey ila xumaadeen, waana kasoo tegay oo waxaan tegay Masaajid Cali Guduud” ayuu yiri Cabdulle Geedo-naar.
Cabdulle Geed-naar ayaa ka hadlay sababtii markii hore Xamar geysay, wuxuuna yiri “Abaartii ayaa xooluhu iigaa dhamaadeen, marka hunguri ayaa i geeyey, midda kale waxaan islahaa dowladdan dadka qaar gaalo ku sheegayaan soo hubi”.
Laashin Geeda-naar ayaa sheegay in markii uu tegay qeybta Shabeellaha Dhexe ay ka joogaan Alshabaab uu la kulmay Madaxa Alshabaab ee gobolkaas iyo mas’uuliyiin kale, islamarkaana lasoo hordhigay shuruudo badan oo uu xusay inuu aqbalay.
“Markii aan tegay Masaajid Cali Guduud waxaa isu yimid mas’uuliyiin badan, waxaana leysoo hordhigay shuruudo badan, oo ay ka mid yihiin inaan 1 sano meel u bixi karin, inaanan shirbi karin, in naagta mar kale leygu nikaaxiyo, inaan cilmi batro iyo damiin leyga noqdo, waana aqbalay” ayuu yiri Cabdulle Geega-naar.
Cabdulle Geedanaar ayaa lagu yaqaanay Shiribka, Guurowga iyo Gabayga, wuxuuna leeyahay Guuroyada Shukaansi, Xamar Waa Bar-bar ka Islaa iyo kuwa kale.
Muqdisho: Ciidamo baaritaan ka weday Dharkeynley oo dilay wadaad